Home » Creative Writing » Mt.Haba (China)
ဒီရေခဲတောင်က မြန်မာကလူတွေ မြန်မာပြည်အမြင့်ဆုံးခါကာဘိုရာဇီမတက်ခင် လာလေ့ကျင့်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဆိုတော့ လွယ်လှတယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြောရရင် ဘယ်တောင်ပဲတက်တက်လျှော့တွက်လို့ မရသလို Risk ကတော့ သူ့နည်းသူဟန်နဲ့သူအပြည့်ရှိပြီးသားပါ။
ကျမတို့ ခရီးစဉ်ကိုကားလမ်းကိုရွေးပါတယ် ။ လေယာဉ်နဲ့ဆိုလတ်မှတ်ခကအဲ့အချိန်မှာဈေးတက်နေတဲ့အပြင် ဗီဇာကကိုယ်သွားချင်တဲ့ပိတ်ရက်နဲ့ ကွက်တိရဖို့ သိပ်မသေချာတော့လို့ပါ။ ကားလမ်းကသေချာသလားဆိုတော့လည်းမန်းလေးမူစယ်လမ်းတကြောမှာကိုယ်သွားပါမယ်ဆိုမှ တိုက်ပွဲသံတညံညံနဲ့ပါ။ ပြန်ပေးဆွဲခံရတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းလည်းထွက်တယ်။ ကြက်ခြေနီတွေလည်းအပစ်ခံရတယ်။ ဆိုတော့ သွားဖို့ တွန့်သွားကြပါတယ်။
နည်းနည်းလည်းငြိမ်ရောသွားမယ်ဆိုပြီးစိတ်ဒုန်းဒုန်းချလိုက်ကြပါတယ်။ နောက်ဆုံးမသကာသူပုန်လက်ရောက်တော့လည်းအတွေ့ကြုံသစ်ပေါ့ ဆိုပြီးပေါက်ကရပြောပြီးကိုမိုက်ကြတာပါ။ အိမ်ကအမေတွေ က တော့ ပိုကုသိုလ်ရကြပါတယ်။ ဘုရားစင်ရှေ့မှာကိုယ်စသွားတဲ့နေ့ကနေ ပြန်ရောက်တဲ့နေ့အထိသတိရတိုင်းမေတ္တာပို့ပေးလို့ပါ။
တိုင်းရေးပြည်ရေးမကောင်းတာကိုတောင် အရေးမလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး ။ ကိုယ်အရေးလုပ်လည်းပြောင်းလဲသွားမှာတခုမှ မမြင်လို့ စိတ်အချဉ်ပေါက်ပြီးဇွတ်ခရီးနှင်ကြတာပါ။
ကားလမ်းကနေသွားဖို့ဆိုရင် ကျမတို့ ဆီမှာ မြန်မာဘက်က ထုတ်ပေးတဲ့ ၁ နှစ်သက်တမ်းရှိတဲ့ ၀င်ခွင့်စာအုပ်အနီရှိဖို့ လိုပါတယ်။ အဲ့စာအုပ်ရှိမှ ရွှေလီရဲစခန်းက ၁၅ ရက်သက်တမ်းရှိတဲ့ ချိုင်းနားပြည် ကူမင်းမြို့ထိ (Kunming)လည်လို့ ရတဲ့ ကား၊ရထာား၊ လေယာဉ်စီးလို့ ရတဲ့ ထောက်ခံစာထုတ်ပေးပါတယ်။ တခါတလေပေါ်လစီပြောင်းရင်လည်းထုတ်မပေးတတ်ပါဘူး။
အဲ့နေ့မှာပဲနေ့လည် ၃ နာရီကားနဲ့ ကူမင်းကိုခရီးဆက်ပါတယ်။ အမြန်လမ်းမကြီးက ပြင်နေတာမို့ လမ်းဟောင်းကသွားတဲ့အတွက် ၄၆၆ မိုင်ကျော် (750.5km) ခရီးကို ၂၃ နာရီလောက်ကားစီးခဲ့ရပါတယ်။ အိပ်စင်ပါတဲ့ကားမို့သာပဲလူတွေလည်းအတော်လေးကို အီစလံဝေသွားပါတယ်။ လမ်းကကောင်းပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ အဲ့လောက်အကြာကြီးဆိုတော့လည်းပန်းပါတယ်။ နောက်တခုက ချိုင်းနားဘယ်လောက်ခေတ်မှီပါတယ်ပြောပြောမပြောင်းလဲသေးတဲ့ အများသုံးအိမ်သာတွေကတော့ အရင်တိုင်းပါပဲ ။ အတော်စိတ်ညစ်စရာကောင်းဆဲပါပဲ။ ဒီတသက်ပြင်ဖို့များအစီစဉ်မရှိကြတော့ဘူးလားမသိ။
လမ်းမှာမြင်ရတဲ့တောင်တွေတိုင်းမှာသစ်ပင်တွေ အပြည့်ရှိပါတယ်။ ကားလမ်းဘေးတောင်နံရံကမြေတွေကိုလည်းတဆင့်ပြီးတဆင့် စနစ်တကျထိန်းထားတာကြပါတယ်။ ကိုယ်တွေ မန်းလေးမူစယ်လမ်းတလျှောက်မှာတော့ တောင်ကတုံးတွေ တော်တော်ပေါပါတယ်။ သူတို့ဖက်လည်းရောက်ရော မြင်ကွင်းကတော်တော်လေးကိုကွာသွားတာပါ။ အပင်တွေမှ အများကြီးမနာလိုစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုများပါတယ်။ လမ်းမှာစစ်ဆေးရေးဂိတ်တခုကို ဖြတ်ရပါတယ်။ စစ်သားတွေ ၀င်စစ်တာပါ။ တကားလုံးကိုတယောက်ထဲကပဲခရေစေ့တွင်းကျစစ်သွားတာပါ။ သူတို့ အလုပ်လုပ်တာအတော်လေးစေ့စပ်ပါတယ် ။
Photo CD (Ye Win)
ရေခဲထဲစီးလို့ရတဲ့ ဖိနပ်တွေ အကျီ င်္တွေ ဘောင်းဘီတွေ တခြားလိုအပ်တာတွေ အကုန်ဝယ်ပြီးတဲ့သကာလပါလာတဲ့ ပိုက်ဆံလေးတွေ၃ ပုံ ၁ ပုံလောက် ကုန်ပါတယ်။
ကူမင်းကနေ ည ၉ နာရီရထားနဲ့ ၃၂၁ မိုင်ကျော် (517km) ခရီးကို၁၀ နာရီလောက်စီးပြီးရင် နောက်ရက်မနက် ၇ နာရီကျော်လောက်မှာလိကျန်းမြို့ကိုရောက်ပါတယ်။ ကြုံကြိုက်လို့ ကူမင်းဘူတာရုံအကြောင်းပြောရရင် ကျမတို့ မန်းလေးမှာသင်္ကြန်ကျလို့ လူကြိတ်ကြိတ်တိုးတယ်ဆိုတာအဲ့ဘူတာရုံအိပ်နေသလောက်ပဲရှိပါတယ်။ ဒါတောင် နှစ်ကူးမဟုတ်ပဲသာမာန်ကြားရက်မို့လိုဆိုပါတယ်။ လူစည်တဲ့အချိန်ဆို မတွေးဝံ့စရာပါပဲ ။ နောက်ပြီးဘူတာရုံရှေ့မှာလက်နက်ကိုင်ထားတဲ့စစ်သားအစောင့်တွေ ရှိပါတယ်။ ကင်းတဲလိုအမိုးအကာနဲ့ ဘူတာရုံရှေ့ တည့်တည့်မှာရဲကားအမိုးပွင့်လိုဟာမျိုးနဲ့ အသင့်အနေထားစောင့်ပါတယ်။ အဲ့ကြားထဲမှာပဲကိုယ့်ရှေ့တင် လူတယောက်ကသူတို့အချင်းချင်းရန်ဖြစ်ပြီးလိုက်ချကျတော့ အဲ့အစောင့်တွေဆီ ၀င်ပြေးတာမှာ ဟိုကသေနတ်နဲ့ ချိန်ပြီး မ၀င်ခဲ့နဲ့ ၀င်တာနဲ့ အပစ်ပဲဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးချိန်ပါတယ်။ ကိုယ်တွေရှေ့တင်မို့ နည်းနည်းတောင်ခေါင်းကြီးသွားပါတယ်။ ခဏနေတော့ ရဲအရာရှိတွေ လာမှ ပွဲငြိမ်သွားပါတယ်။
ရာသီဥတုကအေးစိမ့်နေတဲ့အပြင် ပေါက်နေတဲ့အပင်တွေ စိုက်ထားတဲ့ပန်းပင်တွေကို မြင်ရတာစိတ်ပျော်ပါတယ်။ ခရီးပန်းတာတွေတောင်ပျောက်သွားတယ်။
မြို့ဟောင်းကိုဒီအတိုင်းပဲထားအဆောက်အဦးဟောင်းတွေကိုပဲမွမ်းမံပြီးဆိုင်တွေအကုန်ဖွင့်ထားတယ်။ တည်းခိုခန်းတွေဖွင့်ထားပါတယ်။ ဗုံတီးပြီးသီချင်းကိုကိုယ်တိုင်ရေးဆိုတီးပြီးစီဒီရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေအများကြီးပဲ။
အမှတ်တရလက်မှုပစ္စည်းတွေကလည်းပေါမှပေါ။ snack မုန့်မျိုးစုံလက်ဖက်ခြောက်မျိုးစုံ ရိုးရာအ၀တ်အစားမျိုးစုံ သူတို့ဒေသထွက်အသီးအနှံ မျိုးစုံရောင်းလို့ရတာအကုန်ရောင်းပါတယ်။
ကော်ဖီဆိုင် လို ပီဇာဟက်လို မက်ဒေါ်နယ် ဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ်။ ရှေးဟောင်းအိမ်တွေထဲမှာပဲညဆိုဘားတွေကလပ်တွေလှိုင်နေတာပါ။ အပြင်ကနေလည်း မြင်ရပါတယ်။ ရိုးရာဝတ်စုံနဲ့ အကတွေလည်းကပြပါတယ်။ ညဆိုတကိုယ်တော် ဂစ်တာတီးပြီးသီချင်းဆိုတဲ့လူတွေလည်းမနည်းပါဘူး။ DJ ပွတ်တဲ့သူလည်းမရှားပါဘူး။
ဖူးစာရှင်လည်းအများဆုံးရှာတွေ့တယ်ဆိုတဲ့ ဒဏ္ဍာရီကလည်းအခန့်သားပါ။ ဆုတောင်းစာရေးပြီးဆုတောင်းလို့ ရတဲ့နေရာတခုရှိပါတယ်။
ဘာဆုတောင်းခဲ့တယ်မသိဘူး အပြန်ကျ တောင်ထိပ်ထိမရောက်လို့ဆိုပြီး တောက်တခေါက်ခေါက်နဲ့ Photo CD (Ko Nigel Lim)
တည်းတဲ့သူအများစုကလည်းကျောပိုးအိတ်တလုံးနဲ့ တောင်တက်ချင်တက် စက်ဘီးစီးချင်စီး tracking သွားချင်သွား စိတ်တူကိုယ်တူဝါသနာတူတွေမို့ တက်ကြွတဲ့စူးစမ်းတဲ့စရိုက်အပြည့်ရှိတဲ့သူတွေကို တစုတဝေးထဲမြင်ရတာပါ။
Mosuo women ( Kingdom of Women)
ထူးခြားတာကမောဆိုးအမျိုးသမီးတွေကို ( Kingdom of women) အမိအုပ်စိုးသောတိုင်းပြည်လို့ သမုတ်ကြပါတယ်။ မောဆိုးအမျိုးသမီးတွေကအိမ်ထောင်ပြုလေ့မရှိဘူး။ အတည်တကျ ယောက်ျားတယောက်ထဲကိုလက်ထပ်လေ့မရှိပါဘူး။ သူနှစ်သက်တဲ့အမျိုးသားကိုသူနှစ်သက်တဲ့အချိန်ထိဖိတ်ခေါ်ပေါင်းသင်းလို့ရပါတယ်။ အမျိုးသားတွေကလည်းညလာအိပ်ပြီးမနက်ကျ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်ပြန်သွားတာပါ။ ဘာတာဝန်ယူမှုမှ မရှိပါဘူး။ နောက်တယောက်ပြောင်းချင်လည်းသဘောရှိပါ။
သူတို့မွေးလာတဲ့ကလေးတွေကိုတော့ ဦးလေးတွေ ဆွေမျိုးတွေကကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်လေ့ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဖေတော့မရှိဘူးပေါ့။
ခုနောက်ပိုင်းတော့ ယဉ်ကျေးမှုပြောင်းလဲလာတဲ့အခါ ရှေးထုံးမပယ်ချင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေရှိသလိုအိမ်ထောင်အတည်တကျ လက်ထပ်ချင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းရှိလာပါပြီ။ နောက်ပြီး AIDS လိုကူးစက်လွယ်တဲ့ရောဂါတွေ ရှိလာတဲ့အခါမှာတော့ ချိုင်းနားအစိုးရက ၀င်ထိန်းပါတယ်။ တယောက်မှာ HIV ရှိပြီဆိုတရွာလုံးကူးဖို့ ရာခိုင်နှုန်းများတာမို့ ပညာပေးသင့်တာပေးပြောင်းသင့်တာပြောင်းပေါ့လေ။ သို့သော် အခုထိအဲ့ရိုးရာကိုဆက်ထိန်းနေသူတွေရှိနေဆဲပါ။
ခုနောက်ပိုင်းခရီးတော်တော်ထွက်ပြီးတဲ့အခါ နားလည်လာတာတခုကတကယ်တမ်းတော့ ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာပြောင်းလဲခြင်းလို့ ပါ။ တရားသေဆုပ်ကိုင်ထားရတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။
တကယ်တမ်းပြောရရင် လိကျန်းနယ်တ၀ိုက်က ရေခဲတောင်တွေကကျမတို့ ကချင်ပြည်နယ် ပူတာအိုဖက်ကရေခဲတောင်တွေနဲ့ ဆက်နေတာပါ။ ပူတာအိုဖက်နေတဲ့ ခေါင်တဲ့ဒေသကတိုင်းရင်းသားတချို့တွေဆိုတာဒီဖက်ကလူတွေနဲ့ အမျိုးနွယ်ဆင်ပါတယ်။ နည်းနည်းပဲကွဲတာပါ။ စကားပြောတော့ကွာတာပေါ့လေ။
ကျမတို့ကHaba snow mountain ကိုသွားတက်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားပြီးသားမို့ ကေဘယ်နဲ့တက်ရတဲ့ ဒီတောင်ကိုမတက်ခဲ့ပါဘူး။ အဝေးကပဲ ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ အချိန်မပေးနိုင်တော့တာလည်းပါပါတယ်။
ကျမတို့ လိကျန်းမှာ ၂ ညအိပ် နေခဲ့လည်ပြီးတဲ့နောက်ရက် ၁၇ ရက်နေ့မှာဟာဘာရွာကိုကားနဲ့ ဆက်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဟာဘာရွာကိုလှမ်းချိတ်ပြီးသား ကား ၂ စီးက လာကြိုပေးပါတယ်။ လမ်းမှာနာမည်ကြီး မြစ်တခုကို ၀င်လည်ခဲ့ပါတယ်။
ကျားတကောင်က မုဆိုးတွေလက်ကနေပြေးရင်း မြစ်ကိုကျော်ပြီး လျှိုစောက်ထဲကနေ တဖက်ကိုခုန်ကူးသွားတဲ့
ရှေးဒဏ္ဍာရီတခုရှိပြီး လက်ရှိလည်းကျားခုန်သွားတယ်ဆိုတဲ့ နေရာမှာကျားရုပ်ထုထားပါတယ်။
အဲ့နေရာမှာယန်ဇီမြစ်ကရေစီးအရမ်းသန်သလိုဘေး ၂ဖက်မှာလည်း ကျောက်ဆောင် မတ်မတ်ကြီး ၂ ခုကြားစီးဆင်းနေတာမို့ Potential အားကောင်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တခုကို မြင်ရပါတယ်။ မြစ်က ၃၇ မိုင်လောက်ရှည်ပြီး Jade Dragon Snow Mountain ကနေHaba snow mountain ကြားလမ်းတလျှောက်မှာစီးဆင်းနေတာပါ။
ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးကျယ်ဆုံးအနက်ရှိူင်းဆုံး ချောက်စာရင်းဝင်ပါ။ နေ့လည်ခင်းနေပူတဲ့အချိန်ရောက်သွားတာမို့ ဆင်းတဲ့အချိန်မသိသာပေမဲ့ လှေကားထစ်တွေ ပြန်တက်တဲ့အချိန် အတော်လေးကိုဟိုက်ပါတယ်။
အပူပိုင်းနေတဲ့သူမို့လားမသိ အေးတဲ့နေရာကို ရောက်ရင် အလိုလိုစိတ်ချမ်းသာပြီး လူကလည်းရွှင်ရွှင်ပျပျဖြစ်လာပါတယ်။
ခါတိုင်းနှစ်တော့ အဲ့ချိန်ရွာမှာ နှင်းတွေထုနဲ့ ထည်နဲ့ ရှိနေတတ်ပေမဲ့ ဒီနှစ်တော့မရှိပါဘူး။ ရွာမှာတည်းရတဲ့အိမ်က အခင်းအကျင်းရိုးရှင်းသလောက် ခေတ်မှီတယ်။ ဗိသုကာတော်တယ်ပြောရမယ်။ ၀ိုင်ဖိုင်ကလည်းကောင်းမှကောင်း Facebook သုံးမရတာတခုပါပဲ။ ရေမီးကောင်းတယ်။ အိမ်ရှင်မက ဟင်းချက်ကောင်းတယ် ။
ကော်ဖီဆိုင်လိုလေး ဖွင့်ထားတာ အောက်ထပ်က ညဆို ရွာထဲက ဧည့်သည်တွေလာထိုင်တယ်။ နှပ်ကော်ဖီကိုမွှေးနေတာပဲ။
အခြေခံအဆောက်အအုံကောင်းသလို စိုက်ပျိုးရေးမှာလည်း နည်းပညာသုံးပြီးစိုက်ပျိုးတတ်တယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်က တိတ်ဆိတ်တယ်။ ဒေသခံတွေက တိုင်းရင်းသားတော်တော်များများဟာ မြို့နေလူထက်စာရင် ရိုးသားတယ်။ စိတ်ရှင်းတယ်။
နောက်ပြီး ရွာကလူကြီးများဦးဆောင်ပြီး summit မရောက်ခင် base camp မှာ ကျောက်တုံးတွေနဲ့ နားနေဆောင်လိုမျိုး အိမ်လေးတွေ ဆောက်ပေးထားတယ်။ လမ်းခုလတ်မှာလည်း နားလို့ရအောင် သစ်လုံးအိမ်လေးတွေလည်း ဆောက်ပေးထားတယ်။ ပြီးရင်တော့ တောင်တက်တဲ့သူတိုင်းကို အခကြေးငွေကောက်ပါတယ်။ ကိုယ်က ဒေသခံလမ်းပြငှားရင် အဲ့ဒီလမ်းပြက ရွာလူကြီးကို ပြန်ပေးရပါတယ်။
စားစရိတ်နေစရိတ် ကားခ လမ်းပြကြေးအပါအ၀င် တယောက်ကို မြန်မာငွေ ၄ သိန်းနီးပါးတော့ ကျပါတယ်။
Haba Snow Mountain ( 17700 ft)
၁၈ ရက်နေ့ မနက် ၉ နာရီ လောက်မှာ ရွာကစထွက်ပါတယ်။ ကျမတို့အဖွဲ့ ၈ ယောက်( မန်းလေးက ၇ယောက် စင်္ကာပူက ၁ ယောက်) မှာ လမ်းပြ ၄ ယောက် ရိက္ခာသယ်ဖို့ မြင်း ၃ ကောင်ပါပါတယ်။ မနက်စာကို တည်းတဲ့လမ်းပြအိမ်က ဆန်ပြုတ် နဲ့ ဂျပါတီ ကျွေးပါတယ်။ Base camp သွားတဲ့ လမ်းမှာ သစ်လုံးအိမ်တခုမှာ နေ့လည်စာ စားပြီးခဏနားရပါတယ်။ ကြက်ဥပြုတ်နဲ့ ဂျပါတီကို မီးပြန်ကင်ပြီး ရေနွေးကြမ်းနဲ့ ကျွေးတာပါ။ တက်နေတုန်း ပူပေမဲ့ အမြင့်ရောက်လေ လေကတဖြည်းဖြည်းအေးစက်လာတာမို့ အနွေးထည်က ချွတ်လိုက်ဝတ်လိုက်ပဲ။ နားလို့ ထိုင်လိုက်တာနဲ့ အအေးက ချက်ချင်းကဲလာတာပါ။
အပင်တွေ ခုတ်ထားတဲ့ လွင်ပြင်တခုတော့ ရှိတယ် ။
လေတဟူးဟူးနဲ့မို့ အေးပြီးခဲလိုက်လာတာ ကြာကြာမရပ်ရဲဘူး။ ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက် စကားပြောလိုက် တက်လိုက်နဲ့ ညနေ သိပ်မစောင်းခင် ၄ နာရီလောက် base camp ရောက်ပါတယ်။
Photo CD (Ei Phyu Phyu Thant Zaw)
ပေက တသောင်းသုံးထောင်ဆိုတော့ သူ့အစွမ်းတော့ စပြပါတယ်။ ကိုယ်အမြင့်ဆုံးရောက်ဖူးတာက ပေတသောင်းကျော်စွန်းစွန်းလေးပါ။ အားလုံး နှုတ်ခမ်းတွေ ထူထူမဲမဲကြီးဖြစ်ပြီး မျက်လုံးတွေ မို့လာပါတယ်။
Base Camp ရောက်ခါစ
Photo CD(Ei Phyu Phyu Thant Zaw)
မြန်ဖို့မလိုပဲ ကိုယ့်နှုန်းနဲ့ကိုယ် တက်ဖို့လည်း မှာတယ်။ အားလုံးကတကယ်တော့ ဒီလောက်ကြမ်းတဲ့တောင်ကို ပထမဆုံးတက်ကြတာပါ။တောင်တက် ဂီယာတွေကိုလည်း တခါမှ မသုံးဖူးကြပါဘူး။ အဲ့အချိန်မှာ ရာသီဥတုကလည်းတော်တော်လေး ဆိုးတဲ့အခြေနေပါ။
base camp မရောက်ခင်လေး
အောက်ဆင့်အိပ်တဲ့ကျမတို့ကလည်း ချမ်းလိုက်တာမှ ဘယ်လောက်ဝတ်ဝတ် အရိုးထိအေးဖြစ်နေတာပါ။
ဒီလိုနဲ့ မိန်းကလေးတွေ ၂ ယောက်တကုတင် ခြေပြန်ခေါင်းပြန်ပေါင်းအိပ်ကြပါတယ်။ ဒါတောင်တယောက်က sleeping bag ယူလာတော့ ကျမက အဲ့ထဲဝင်အိပ်တာပါ။ စအိပ်အိပ်ချင်း ဘယ်လိုမှ အိပ်လို့ မရပါဘူး။ အိပ်မပျော်တာMountain sickeness (MS) တမျိုးပါ။ ဗစ်တိုးရီးယားမှာရော ဖုန်ကန်မှာရော ညတိုင်း အိပ်မပျော်ခဲ့တာ တကယ်တော့ MS ကြောင့်ပါ။ ခုမှ သဘောပေါက်တယ်။
ဒီရောက်တော့သူက သွေးတိတ်ပြီး အိုခေနေပါပြီ။ ကျမတို့က အခုမှ စကြတာပါ။
စားဖိုဆောင်သွားပြီး မနက်စာ ဂျပါတီနဲ့ ဆန်ပြုတ်ကိုသွားစားတဲ့အချိန် ဘယ်လိုမှ မြိုချလို့ မရတော့ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ ကျမကို summit မတက်ဖို့ နားချကြပါတယ်။ လမ်းပြကလည်းမေးပါတယ်။ ခေါင်းက ဘေး၂ ဖက်ကိုက်တာဆို MS ရှေ့နောက်ကိုက်တာဆို ရိုးရိုး။ ကျမကသေချာပေါက် MS ဖြစ်နေတော့ ခဏနေ ပြန်ဆင်းဖို့ လမ်းပြတယောက်ချန်ပေးမယ်ပြောပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကျမသူတို့ဆီက ရေနွေးကြမ်းထဲ ထန်းညက်ရောစိမ်ထားတဲ့ ဟာကို ၂ ကျိုက် ၃ ကျိုက်မော့သောက်လိုက်မိတယ်။
အဆောင်ပြန် ပြင်စရာရှိတာပြင်ပြီး တယောက်နဲ့ တယောက်ဖက်ပြီး အားပေး နှုတ်ဆက်နေတဲ့အချိန် ကျမပျို့တာရော ခေါင်းကိုက်တာရောရပ်သွားပြီး သွေးနွေးလာပါတယ်။
summit တက်ဖို့ အိတ်ကလည်းပြင်ပြီးသားဆိုတော့ ကျမလမ်းပြကို ငါအခြေနေကောင်းလာပြီ တက်နိုင်သလောက်တက်ကြည့်ချင်တယ် ဖြေးဖြေးတက်ပါ့မယ်။ အခြေနေဆိုးတာနဲ့ ချက်ချင်းပြန်ဆင်းပါ့မယ်ပြောပြီး လိုက်တက်သွားပါတယ်။
MS အတွက် အကောင်းဆုံး ကုထုံးက ဦးနှောက်ကို အချိုကျွေးတာပါ။ ထန်းညက်နဲ့ ဂျင်းကို ရေနွေးကြမ်းနဲ့ရောသောက်ရင် ယူပစ်သလိုပျောက်တယ်။ လမ်းပြတွေက အဲ့ဒါတွေ ဒီရောက်ကထဲတချိန်လုံးသောက်နေတာကျမ တောင်းသောက်ပလိုက်တာ ကံကောင်းသွားတယ်။
ကျမကတော့ အခြေနေမကောင်းလို့ ကင်မရာကို စိတ်ဒုန်းဒုန်းချပြီး ထားပစ်ခဲ့ပါတယ်။ရိုက်စရာဘာမှ ပါမသွားပါဘူး။
လမ်းပြက လေးယောက်မှာ ကျမကို သီးသန့် တယောက်ပေးလိုက်ရတဲ့အတွက် လူ ၆ ယောက်အတွက် လမ်းပြ ၃ ယောက်ပဲ ပါပါတော့တယ်။ တခြားတက်တဲ့အဖွဲ့တွေက လမ်းပြတယောက် လူတယောက်နှုန်း နဲ့ တက်ကြတာပါ။ သူတို့က ၃ ရက်မြောက်ဆက်တက်ကြတာပါ။ ကိုယ်ဇွဲကောင်းလှပြီ မိုက်လှပြီ ထင်နေတာ သူ့ထက်ကဲ ရွှေပြည်စိုးချည်းပဲ ။
Photo CD ( Ye Htut)
ခြေတလှမ်းလှမ်းတိုင်း မောလွန်းလို့ မနည်းလျှောက်ယူရပါတယ်။ ၁၅ မိနစ်လောက်တက်ပြီး တိုင်း ၃ မိနစ်လောက်နားတယ်။ တခါတော့ လေပြင်းတချက်အဝှေ့မှာ ကျောက်တုံးတွေပေါ်မှာ ရေခဲပြင်ပါးပါးလေးတွေ နင်းမိပြီး လျှောကျသွားပါတယ်။ လမ်းပြက ဂုတ်ကနေ မတင်ပြီး ဆွဲထားပေးရပါတယ်။
လေဆောင့်တိုက်တဲ့အချိန်ဆို ကျောက်တုံးအကွယ် မရှိတဲ့ ကျောက်ဖျာပေါ်ရောက်နေတဲ့အနေထားဆို လှဲပြီးအိပ်ချ တခါတလေ ကျောပေးပြီး ဒူးကွေးထားရပါတယ်။
ဘယ်သူမှ အလောင်းပြန်မရပါဘူး။ ရှာလို့လဲ မတွေ့ပါဘူး။ တောင်တခုလုံးက ကျောက်တောင်စစ်စစ်မတ်မတ်ကြီးဖြစ်ပြီး ချောက်တွေကလည်း နည်းမှမနည်းတာ။ ခါကာဘိုရာဇီနဲ့ အမျိုးဆိုတော့လေ။
ရေခဲတွေကလည်း အထက်ရောက်လေ ထုကြီးလေနဲ့ တထပ်ပြီး တထပ်အုပ်သွားမှာကိုး။
နားလိုက်တက်လိုက်နဲ့ မိုးကနည်းနည်းလင်းလာပါတယ်။ လေတိုက်နှုန်းကလည်း တစက်မှ မလျော့တဲ့အပြင် ပိုပြင်းလာပါတယ်။ ပေ တသောင်း ငါးထောင်လောက်လည်းရောက်ရော ကျမရဲ့ ဆံပင်တွေ ရေခဲစဖြစ်လာပါပြီ။ အကျီ င်္ပေါ်မှာလည်း ရေခဲမှုန်တွေ ဖြစ် လမ်းလျှောက်နှုန်းလည်း ကျလာပါပြီ။ လက်အိတ်အောက်က လက်ချောင်းလေးတွေ စကျဉ်လာပါတယ်။
ကံကောင်းတာတခုက သူ့ဆီမှာ ကင်မရာသေးလေးနဲ့ ဖုန်းပါတယ်ဆိုတော့ မောနေတဲ့ကြားက စိတ်တိုင်းကျမဟုတ်ပေမဲ့ ပုံနည်းနည်းပါးပါးတော့ ရခဲ့ပါတယ်။ မဟုတ်ရင် ကျမပြန်သာဆင်းလာရတယ် စိတ္တဇဖြစ်ပြီး အိပ်လို့တောင် ပျော်မှာမဟုတ်။
စဆင်းတော့ မိုးလင်းပြီ။ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အောက်ကို သဲသဲကွဲကွဲမြင်ရတဲ့တခဏ လူက မူးလိုက်လာပါတယ်။ အောက်ကို ကြာကြာကြည့်လို့မရသလို အထက်ကိုလည်း မော့မကြည့်ရဲတော့ပါဘူး။ ရွတ်လိုက်ရတဲ့သံဗုဒ္ဓေ တက်ချင်အုန်းဟဲ့ ရေခဲတောင် ကိုယ့်ဟာကိုပဲ ကြိတ်ဆဲမိတော့တယ်။
တလှမ်းလောက်မှားဆင်းရင် သေပြီဆရာပါ။ အတော်လေးမတ်တာမို့ အဆင်းဘယ်နှယ့်ဆင်းရမယ်မသိတော့ပါဘူး။ လူလည်း ဖြုံသွားပါတယ်။ ခဏလောက်နောင်တရချင်သလိုလိုဖြစ်သွားပေမဲ့ ဆင်းသွားတဲ့နောက်တော့ အဆင်ပြေသွားပါတယ်။
ခဏနားမုန့်နည်းနည်းပါးပါးစား ကျွဲရိုင်းဖောက်သောက် ပုံနည်းနည်းရိုက်ပြီး ဖြေးဖြေးချင်းဆင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လေကြမ်းတချက်လောက်ဆောင့်မိလိုက်တဲ့အချိန် ကျမတို့ ၂ ယောက်လုံးလျှောပြီး လမ်းမှာ ၂ ခါလောက်ပြုတ်ကျပါတယ်။ ကျမကဒူးသိပ်မခိုင်ချင်တော့တာမို့ ခဏခဏလျှောကျပါတယ်။ တခါမှာတော့ ကျမကျောပိုးအိတ်ထဲက ဆူးချွန်ပါတဲ့ သံဖိနပ်ကို ဖိမိပြီး အိတ်က ပေါက်သွားပါတယ်။
လက်က ရေခဲပုဆိန်ကိုတော့ စတက်ကတည်းက မချွတ်တမ်းဝတ်ထားတာမို့ ပြုတ်ကျမသွားပါဘူး။ သို့သော်ဈေးကြီးပေးဝယ်လိုက်တဲ့အသစ်စက်စက်ရေခဲဒဏ်ခံဘောင်းဘီက ဒူးနားမှာ စုတ်ပြီးပြဲသွားတာမို့ ငိုချင်သလိုလိုတော့ဖြစ်သွားတယ်။ အတွင်းကတော့ ဒူးစွပ်နဲ့မို့ နည်းနည်းတော့ ခံသာလိုက်ပါတယ်။ တကိုယ်လုံးကကျဉ်နေတော့ သိပ်တော့မသိသာသေးပါဘူး။
မနက် ၄ နာရီ စတက်ပြီး ၁၀ နာရီကျော်ကျော်လောက်မှာ base camp ပြန်ရောက်ပါတယ်။ ခွေကျန်နေတဲ့တယောက်က ကျွဲရိုင်းသောက်ပြီး အခြေနေကောင်းလာပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ထွက်တာမို့ မရှိတော့ဘူး။ ကျမတို့လည်း မီးဖိုထဲသွားမီးလှုံ နွေးအောင်လုပ် လမ်းပြတွေနဲ့ နည်းနည်းပါးပါး အာလူးဖုတ်ပြီး အခန်းပြန်စောင်ခြုံအိပ်ပါတယ်။
အခန်းပြန်ရောက်ခါစပဲ အဖွဲ့ထဲက အမတယောက်ပြန်ရောက်လာပါတယ်။
သူက အထက်မှာ လက်အိတ်ချွတ်ပြီး ကြည့်တဲ့အချိန်လက်ထိပ်တွေမဲလာတာမို့ ဆက်တက်ရင် လက်ဖြတ်ရဖို့ နီးတာမို့ ချက်ချင်းပြန်ဆင်းချလာတာပါ။ ဒါတောင် သူက ဒီတောင်ကို တခါတက်ဖူးပြီး ၂ ခေါက်မြောက်အတက်မှာ သတိမထားမိလိုက်ပဲ ဖြစ်သွားတာပါ။ ဒီတခေါက်က ရာသီဥတုကို သေချာမကြည့်ခဲ့မိတာ အတော်ဆိုးပါတယ်။ ကိုယ်တွေကလည်း ရတဲ့ရက်ကို လာရတာဆိုတော့ ခပ်ပေါ့ပေါ့ပဲ တွေးမိခဲ့ကြတာပါ။ အပျော်တက်တာဆိုပြီး။
သူ့နောက်မှာတော့ နောက်ထပ် ၂ ယောက်ပြန်ဆင်းလာကြပါတယ်။ ကျမတို့ အဖွဲ့ထဲ ဆက်တက်နိုင်တာ ၂ ယောက်ပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။ သူတို့ ၂ ယောက်ကိုပဲ မျှော်လင့်လို့ ရပါတော့တယ်။ နေ့လည် ၂ နာရီလောက်မှာတော့ သူတို့ ၂ ယောက် (မိန်းကလေး ၁ ယောက် ၊ ယောက်ျားလေး ၁ ယောက် )ပြန်ရောက်လာပါတော့တယ်။
အဖွဲ့ထဲက strong အဖြစ်ဆုံး ဂျလေဘီတယောက်ပါ
ရေခဲစီး ဖိနပ်ချွန်ကို လဲစီးတဲ့နေရာထိရောက်ပေမဲ့ ပေ ၁ ထောင်လောက်အလိုမှာ ပြန်ဆင်းခဲ့ကြတာပါ။ ရာသီဥတုအတော်ကြမ်းပြီး လမ်းပြက ၁ ယောက် လူက ၂ ယောက်တက်ရတာမို့ တက်ဖြစ်ရင်တောင် တယောက်ထဲကိုပဲ ဆွဲခေါ်သွားလို့ ရမှာမို့ က တကြောင်း လမ်းပြကိုယ်တိုင်က အတော်လေးကို ဟိုက်နေတာကတကြောင်း ဆက်တက်ရမဲ့ ပေတထောင်ကျော်လောက်မှာ ရေခဲက ပြင်လိုက်ကြီး ၆၀ ဒီဂရီမရှိတရှိမတ်တဲ့ ရေခဲကြောမတ်မတ်ကြီးကို ကြည့်ပြီး ဖြုံသွားတာကတကြောင်းပါ။
၃ ဖွဲ့တက်တာမှာ ကျမတို့ အဖွဲ့ရယ် ဂျပန်အဖွဲ့ရယ် တောင်ထိပ်မရောက်ခဲ့ပါဘူး။ နောက်တဖွဲ့လည်းပြန်ဆင်းကြပါတယ်။ နောက်တဖွဲ့ထဲက အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့ အမျိုးသားတယောက် တောင်ထိပ်ရောက်ပါတယ်။
အ၀တ်အစားက အပေါ်ဝတ်တထည်ကို ၅ သိန်းတန်လောက်ဝတ်ပြီး ၀တ်စုံကတင် အတော်လေးကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး သိသာနေတာမို့ သူတော့ရောက်နိုင်မယ်ဆိုတာ မှန်းမိပြီးသားပါ။
မရောက်ခံနိုင်ရိုးလား ၃ ရက်ဆက်တိုက် တက်နေတာ ဒီနေ့မှ ရောက်သွားတာဆိုတော့ လမ်းကြောက သိပြီးသားဖြစ်နေတာကိုး။ လမ်းပြကလည်းကောင်းတော့ ဆွဲခေါ်သွားတာပါ။ ကြိုးလည်းပါတာကိုး။
နှင်းတွေကျ လေတွေတိုက်ပါတယ်။ အပြန်လမ်းမှာ ဗွက်တောဖြစ်သွားပါတယ်။ နှင်းကစို လေကအေးနဲ့ အသံတောင် သိပ်မထွက်နိုင်ဘူး။ လမ်းမှာ ၂ ဖွဲ့ကွဲပြီး နောက်ကျဓာတ်ပုံရိုက်ကျန်တဲ့ ကျမတို့ မိန်းကလေး ၃ ယောက်ကျန်ပါတယ်။ လမ်းပြက သစ်လုံးအိမ်က စောင့်နေတဲ့အချိန် ၃ ယောက်သား စကားတပြောပြောနဲ့ လမ်းမှားပါတယ်။ ညာဖက်လမ်းကြောလိုက်ပြီး ရွာတွေလည်ကုန်ပါတယ်။
သတိထားမိတဲ့အချိန်နာရီဝက်လောက်ကြာနေပြီ။ အဲ့ဒါနဲ့ လာလမ်းအတိုင်းပြန်လိုက်နေတုန်း လမ်းမှားကြီးဆက်သွားမိတုန်း နတ်သမီး ၆ ယောက်နဲ့ တွေ့ပါတယ်။ အသက် ၄၀ ကျော် ၅၀ ၆၀ အရွယ်တွေ ရိုးရာဝတ်စုံတွေကိုမှ အပြည့်အစုံဝတ်ထားပြီး ရိုးရာဦးထုပ်အ၀ိုင်းကြီးတွေ ဆောင်းထားပါတယ်။
ကျမကကျမတို့ ဟာဘာရွာဆင်းမှာ ဘယ်လမ်းရောက်နေလဲဆိုတော့ သူတို့ရွာသွားတဲ့လမ်းမှားရောက်နေတယ်။ ဟာဘာရွာဆင်းတဲ့လမ်းရောက်ချင်ရင် သူတို့နဲ့လိုက်ခဲ့ပါတဲ့။
ကျေးဇူးတင်တယ်ပြောတော့ ငါတို့ နင်တို့ဆီမှာလမ်းမှားနေရင်းလည်းပြပေးမှာပဲ မဟုတ်လားလို့ ပြန်ပြောသွားပြီး ကျေးဇူးတင်ဖို့ မလိုပါဘူးလို့ ပြောသွားပါတယ်။
ဓာတ်ပုံတောင် မရိုက်လိုက်မိဘူး။ သူတို့ကလည်း အဲ့အထက်ကလမ်းလေးကိုတက်သွားလိုက်တာ ခဏဆို ပျောက်ကိုသွားပါတော့တယ်။
ကျမက သူတို့ကို နတ်သမီးတွေလိုပဲ သတ်မှတ်ပြီး သတိရကျေးဇူးတင်နေတုန်းပါ။ ၀တ်စုံပြည့်နဲ့မြင်ရတာထူးဆန်းလို့ပါ။
လူဆိုရင်တောင် နတ်တွေက ကျမတို့နဲ့တွေ့ဖို့ လွှတ်လိုက်တာဖြစ်မှာပါ။ ကျမက လမ်းမှားမှန်းသိနေတာတောင် ခပ်သဲ့သဲ့ကြားတဲ့အသံတွေနောက်ကို ရမ်းသမ်းလိုက်တဲ့အချိန် မျက်နှာခြင်းဆိုင် ဘွားခနဲ့တွေ့ခဲ့တာပါ။
ဒီလိုနဲ့ညနေ ၆ နာရီကျော်လောက်မှာ ရွာကတည်းတဲ့အိမ်လေး ပြန်ရောက်ပါတယ်။ ရောက်ရောက်ချင်း ၇ နာရီလောက်ထမင်းစားပြီး ပစ္စည်းတန်းသိမ်း ရပါတယ်။ နောက်ရက်မနက်အစောမှာတော့ လိကျန်းမြို့ဟောင်း ၃မြို့ထဲက နှစ် ၁ ထောင်ကျော်ရှိတဲ့ (Shuhe Ancient Town ) နောက်တမြို့ကို ကူးပါတယ်။
Shuhe Ancient Town, Lijiang City, Yunnan Province.
ညဖက်မှာတော့ ဘားတွေမရှိပါဘူး။အစောကြီးသိမ်းကြတယ်ဆိုင်တွေ ပြီးရင်ရာသီဥတုကပိုအေးပါတယ်။ လေတွေပဲတိုက်လို့လားမသိ။
ကော်ဖီဆိုင်တခုမှာရှိတဲ့ ကော်ဖီပါမုန့်လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ရဲ့ အရသာက တော်တော်လေးကို စွဲလမ်းစရာပါ်။ လက်ဖက်ခြောက်လိုမျိုး ပန်းတွေကို အခြောက်ခံပြီး ရေနွေးကြမ်းထဲခပ်သောက်လို့ ရတဲ့အခြောက်ပန်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ကျမကတော့ ဘယ်ရီသီးကို အခြောက်ခံထားတဲ့ ပုလင်းလေးတလုံးဝယ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ကို ရေနွေးထဲ ထည့်ဖောက်လိုက်ရင် ခပ်သင်းသင်းဘယ်ရီနံ့ လေး ထွက်ပြီး အရသာက တမျိုးပါ။
အဲ့ဒီမှာတည်းခဲ့ရတဲ့ Yhu Chin ( Lvwo Internation Youth Hostel) ကလည်း တော်တော်အဆင်ပြေပြီး သူ့ရဲ့ ဧည့်ခန်း ကတော်တော်လှပါတယ်။ ပိုစ့်ကတ်တွေ ရောင်းပေးပြီး တကမ္ဘာလုံးကို ပို့ပေးပါတယ်။ ဖတ်ဖို့ စာအုပ်တွေလည်း ထားပေးထားပါတယ်။ အမှတ်တရစာရေးလို့ရတဲ့ Board တခုထားပေးပြီး ဘောပင်ရောင်စုံချပေးထားပါတယ်။ ရှေးအိမ်ပေမဲ့ အထဲက အပြင်ဆင်က ခေတ်မှီပါတယ်။
ဘ၀မှာ တသက်လုံးအမှတ်တရဖြစ်နေစေမဲ့ ယစ်မူးစရာကောင်းတဲ့ညနေခင်းတခုကို အမှတ်တမဲ့မွေးဖွားပေးခဲ့တဲ့ ဒဏ္ဍာရီထဲက မြို့ဟောင်းတခုပါ။
လိကျန်းမှာတည်းတဲ့ Yha China တည်းခိုခန်းအများစုကတော့ ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲ တည်းတည်း တညကို မြန်မာငွေနဲ့တွက်ရင် တသောင်း ၊ တသောင်းခွဲက အများဆုံးပါပဲ။ ဈေးသက်သာပြီးသန့်ရှင်း အဆင်ပြေပါတယ်။
အနိမ့်ဆုံး ပေါင်းတည်းရတဲ့ ကုတင်အဆင့်တွေနဲ့ ဟာဆို တညကို ၅ ထောင်လောက်ပဲ ကျပါတယ်။
သွားချင်ရင် ရောက်အောင်သွားလေ ရောက်ပါတယ်
Post of 2015
Thank you sweet… <3
အဲ့လောက်လည်း လူက ခံနိုင်ရည်မရှိပါဘူး ဒီလိုပဲ သွားချင်တော့လည်း ရောက်အောင်သွားလိုက်တာပါ
အသက် ရလာရင် မလုပ် နိုင်တော့ဘူး …. :hee:
အသက်ကို ဆင်ခြေမပေးပါနဲ့ ကထူးဆန်းရယ်
နောက် ကျနော်မနှစ်က ဖုန်ကန်ရာဇီ ရေခဲတောင် တက်တော့ အတူပါတဲ့ ရေဆင်းမှာ ဗော်လန်တီယာလုပ်နေတဲ့ ကိုရီးယားဆရာတယောက်ဆို ၅၆ နှစ်ရှိပြီ ကိုယ့်ထက်တောင် သန်သေးတယ် သူရှေ့ဆုံးက ကိုယ်တွေက လူငယ်ဖြစ်ပြီး နောက်က
သြစတြီးယား က ဆရာတယောက်ဆိုရင်လည်း ၆၀ ကျော်မှတ်တာပဲ
သူတို့ကတော့ အသက်ကြီးလည်း တက်လို့ရသရွေ့ မသေမချင်းတက်နေမဲ့ပုံတွေရှိတယ်
အဓိကက ကျန်းမာရေးကို ဂရုတစိုက်နဲ့ သေချာလိုက်စားရင် စိတ်ရှိသရွေ့ ကျန်းကျန်းမာမာနေနိုင်ပါတယ်ဗျာ
ဆောင်းပါးကရှည်သမို့.. သတင်းစာမှာ တမျက်နှာနေရာယူ.. ခရီးသွားဆောင်းပါးအဖြစ်… ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြဖူးတယ်…။
တို့တွေက ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်တွေပဲဟာ သွားလို့ရတာပေါ့လို့
ဒါပေမဲ့ တခါတလေ ပေါ်လစီပြောင်းရင်လည်း သွားလို့ မရတတ်ဖူး
ဒီကြောင်ကို အဲ့ချောက်ထဲ ခုန်ချခိုင်းရမှာ ဟိုဘက်ကမ်းရောက်မရောက်စမ်းတဲ့အနေနဲ့ :loll:
ရွှေအိက ပိန်ပိန်ပါးပါးလေးနဲ့ သွားချင်သွားလို့ရပါတယ်
မမရယ် အဲ့လောက်လည်း မဟုတ်ပါဘူး အမှန်က ကျနော်တို့ တမြို့ထဲ နေဖြစ်ရမှာ
ကျနော်တို့ တောင်တက်အဖွဲ့ထဲမှာ ကထိက ဆရာမတယောက်ရှိတယ် အသက် ၄၀ ကျော်အပျိုကြီး ကျနော်တို့ နဲ့ ဆို သူငယ်ချင်းပေါင်းပေါင်းတာ သူနဲ့နေရင် စိတ်ကို ချမ်းသာနေတာပဲ
Well …. ဒီ လို ခရီး သွားဖို့ ကို စိတ်မာရုံမက ခေါင်းပါ အတော်မာလွန်းလို့ ရောက်ဖြစ်တာလို့ ဘဲ မှတ်ချက်ချတော့မယ်။
ဒီလောက်အေးတဲ့ နေရာ မှာ အကျင့်မရှိဘဲနဲ့တောင် ရေခဲပြင်ထိပ်ကို အတော်ပေါက်တဲ့ အထိ သွားနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်သတ္တိကို ချီးကျူးပါ့ကွယ်။
Thank you for your praise :chitt:
မပိန်ဘူး အရီးရဲ့ ဒါပါပဲ ပိုစားကောင်း အိပ်ကောင်းလို့ အဲ့က အပြန် ပေါင်ချိန်တောင်တက်လာသေးတယ်
အခု ညီမလေး မင်္ဂလာဆောင်ရှိ်လို့ ၀ိတ်ချရအုန်းမယ် ဘယ်လိုချချ မကျနိုင်ဘူး ဖြစ်နေလို့ :cryy:
အရမ်းအားကျသွားတယ် .. တရုတ်ပြည်ကိုလဲ အရမ်းလွမ်းသွားတယ် ..
ယူနန်ပြည်ထဲ သွားချင်သေးတဲ့နေရာက ရှန်ဂရီလာရယ်
သများက လောလောဆယ်အလုပ်မအားဘူး ရက်ရှည်ခွင့်မရှိဘူး ဒီကြားထဲ ပွဲတွေက ဆက်နေလို့ အလုပ်က
လိုက်မယ်လို့ အတိအကျမပြောနိုင်ပေမယ့် သွားမယ်ဆို လက်တို့အုံး။